Home Wararka Degmooyin ka tirsan Muqdisho oo Dowladda Gacanteeda ka Baxay.
Degmooyin ka tirsan Muqdisho oo Dowladda Gacanteeda ka Baxay.
Degmooyinka Kaaraan iyo Heliwaa (Huriwaa) ayaa waxaa habeenkii ka taliya kooxo burcad ah oo ay masuuliyiinta ku sheegeen inay yihiin burcad ku labisan dharka ciidanka, tan oo dadka degaanka shaki weyn ku abuurtay. Haddii ay si xor ah u wataan direyska ciidanka oo ay dowladda ogtahay, ciidankana aysan waxba ka qabaneyn waxay muujineysa inay yihiin rag ciidanka ka tirsan oo la ogyahay aragixinta ay ku hayaan dadka ku dhaqan degmooyinkaas.
Ammaan daro baahsan ayaa ka jirta degmooyinkaas oo ah dhaca waqooyiga magaalada Muqdisho, waxaana dadka deegaanka ay qaati ka taagan yihiin maleeshiyo hubeysan oo ku labisan dareeska ciidamada dowladda ayey dadku leeyihiin.
Xiliga qoraxda dhacdo ayaa gaadiidka Bajaajta iyo kan dhaweeyaha ee Hormuud ayaa intooda badan ogolaaneyn inay dadka u socda degmooyinkaas qaadaan, iyagoo ku sababeynaayo dhibaatada ammaan daro ee halkaas ka jirta.
“Qofka labisan dharka ciidanka oo ay ku dil yihiin calaamadaha ciidanka markuu joojiyo dhowr qof oo kalana ee ay halkaas hore qoryo la taagan yihiin waxaad ku khasaban tahay inaad amarkooda fulisid” ayuu yiri mid ka mid ah dadka degaanka oo magaciisa diiday cabsi darted.
Xaafadaha degmada Kaaraan ayaa ayaa aad u daran amaan darada ka jirta, waxaana ugu daran xaafadaha laamiga ka koreeyo ee Nageeyle, Jabuuti, Buurka Diikoow, Xaliimo Heyti iyo xaafadda Arjantiin.
Sidoo kale Heliwaa ayaa dhammaanteed isku mid ah oo meelmeel dhaanta ma jirto ayey leeyihiin shacbiga. Dadka ku fiidsada guryaha irdahooda ayaa laga xuubsadaa taleefanada, gaadiidka Bajaajta ayaa inta la joojiyo dadka saaran la baartaa, halka qaarkood burcada ay kaxeystaan bajaajta.
Dilal kala duwan oo todobaadyadii u danbeeyay ka dhacay degmada Kaaraan, markii dhalinyaro fiidsanayay ay isku dhejiyeen inay dhiibaan taleefanada burcada labisan direyska ciidanka ay ku amreen inay dhiibaan.
Ma jirto cid mas’uuliyad iska saartay wax ka qabashada amaan darada ka jirta degannadaas, waxaana habeen walba ka dhaca isku dhacyo dhex mara burcada ama askarta wax baarata iyo gaadiidka hubeysan ee isticmaala wadooyinka degmada Kaaraan iyo Heliwaa.
Waxaa muuqda calaamadihii dowlad la’aanta iyo in dadka Muqdisho ay ku khasban yihiin inay hub urursadaan iyadoo gaadiidleyda ay ku khasban yihiin inay ciidan hubeysan saartaan bajaajka waana bilowga khaterta inay dowladnimada dunto.
MOL ayaa waxay digniino hore ka bixineysay 2017 inuu dalka halkaan gaari doono, haddaan wax laga qaban kooxda burcadda ah ee dalka qabsatay, waxaana rajeyneynaa inuu intaan noogu ekaado wqtigooda oo uu dalka helo dowlad tan ka wanaagsan maalmaha soo socda.
Waxaa rajo weyn laga qabaa in xildhibaannada cusub oo ay dadka qaar u haystaan kuwa la keensaday in noqon karaan dhallinyaro isbadal muuqda sameysa iyo inay soo afjari karaan dhibaatooyinka dalka haysta una codeyn doonaan shakhsi leh khibraddo isku jira oo na samata bixiya.
Previous articleKhilaafka Mareykanka iyo Turkiga oo waji kale yeeshay
Next articleQeybtii 2aad: Handadaad iyo Ballanqaadyo ay Villada ku Bilaawday Xildhibaanada Cusub.